laacibfm.com » Frank Lampard Oo Runta U Sheegay Callum Hudson-Odoi Iyo Shuruudaha Uu Ku Xidhay In Uu Markale Ciyaari Karo.
Frank Lampard Oo Runta U Sheegay Callum Hudson-Odoi Iyo Shuruudaha Uu Ku Xidhay In Uu Markale Ciyaari Karo.
Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa si cad runta ugu sheegay xidiga kooxdiisa ee Callum Hudson-Odoi kaas oo aan wax fursad ah ku haysan kooxda kowaad kadib xili ciyaareed saamayno badan oo kala duwan shaqsi ahaan iyo ciyaartoy ahaanba ku soo lahaa.
Callum Hudson-Odoi ayaa soo qaatay xili ciyaareed aan fiicnayn laakiin Lampard ayaa u sheegay in haddii uu doonayo in uu shaxdiisa ku soo bixi karo in marka hore uu shaqo adag qabto oo uu qaab ciyaareedkiisa soo gaadhsiiyo Christian Pulisic iyo Willian.
Callum Hudson-Odoi ayaa sanadkii hore doonayay in uu Bayern Munich ku biiro laakiin Chelsea ayaa diiday dalabyo badan oo ay Baviara xidigan ku doonaysay balse taas badalkeeda halkii uu fursad badan heli lahaa waxa uu u muuqdaa mid hoos u dhac wayni ku yimid.
Tababare Frank Lampard oo aan waxba u qarin Callum Hudson-Odoi ayaa yidhi: “Isagu waxa uu u baahan yahay in uu maalin kastaba si adag ugu shaqeeyo tababarka isla markaana waqtiga uu fursada helo in uu xaqiiqdii ciyaarta wax tarkiisa ku muujiyo”.
Laakiin Lampard ayaaba heerkaas hadalkiisa dhaafiyay wuxuuna ku xidhay Callum Hudson-Odoi in uu la qaab ciyaareed noqdo Pulisic iyo Willian oo shaxdiisa uga soo horeeya taas oo xidiga reer England dhaliil wayn ku ah.
Lampard oo waxa looga baahan yahay Callum Hudson-Odoi sii sharaxaya ayaa yidhi: “Waxaanu arkaynaa waxa ay samaynayaan Christian Pulisic io Willian. Callum waxa uu baahan yahay in uu wax la mid ah muujiyo. Qaababkooda kala duwan ayay iyagu saamayn ku samayn karaan”.
Hadalka Lampard ayaa u muuqda mid dhaliil culus ah balse uu cadaadiska ku saarayo da’yarka kooxdiisa ee Callum Hudson-Odoi kaas oo tan iyo intii xili ciyaareedka lagu soo laabtay aan shaxda Blues kulan ku soo bilaaban.
Inkasta oo dhawr todobaad uu bilaash kaga baxayo Willian kooxdiisa Chelsea, haddana Lampard ayaan taas ku ciqaabin xidiga reer Brazil maadaama oo uu doonayo in uu ka caawiyo sidii uu Champions league ugu soo bixi lahaa.
Laakiin Callum Hudson-Odoi oo hadda boos ka waayay Christian Pulisic iyo Willian ayaa xili ciyaareedka cusub ee soo socda waxa uu sii wajihi karaa xaalad ka sii adag marka ay saxiixyada cusub ee Blues kooxda soo gaadhaan.
Chelsea ayaa haddaba sugaysa in ay kooxdeeda dhawaan soo gaadhaan saxiixyada cusub ee Timo Werner iyo Hakim Ziyech kuwaas oo xaalada Callum Hudson-Odoi uga sii dari kara.